बाइबलका कथाहरू: दीना आपत्‌मा पर्छे - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
दीना कसलाई भेट्न जाँदैछे, हेर त। ऊ कनानी केटीहरूलाई पो भेट्न जाँदैछे। उसको बुबा याकूबलाई के यो कुरा मनपर्ला? यसको जवाफ थाह पाउन कनानी केटीहरूबारे अब्राहाम र इसहाकको विचार के थियो, एकछिन सम्झने कोसिस गर त।
नभन्दै दीना आपत्‌मा परी। चित्रमा दीनालाई हेरिरहने कनानी केटोलाई हेर त। उसको नाउँ शकेम हो। एकदिन दीना कनानी साथीहरूलाई भेट्न गएको बेला शकेमले दीनालाई जबरजस्ती आफूसित सुत्न लगायो। यसो गर्नु गलत थियो। किनभने बिहे गरेपछि मात्र लोग्नेमान्छे र स्वास्नीमान्छे सँगै सुत्न हुन्छ। शकेमले दीनासित गरेको यो खराब कामले गर्दा धेरै आपत् आइपऱ्यो।
यो जम्मै आपत् कसरी सुरु भयो तिमीलाई थाह छ? हो, दीनाले परमेश्वरको आज्ञा नमान्ने मान्छेहरूलाई साथी बनाएको हुनाले। हामीले पनि परमेश्वरको आज्ञा नमान्ने मान्छेहरूलाई कहिल्यै आफ्नो साथी बनाउनु हुँदैन।
अब्राहाम र इसाहक किन आफ्ना छोराछोरीहरूले कनान देशका मान्छेहरूसित बिहे गरेको चाहँदैनथे?
आफ्नी छोरीले कनानी केटीहरूलाई साथी बनाउँदा के याकूब खुसी भयो?
चित्रमा दीनालाई हेरिरहने केटा को हो र उसले कस्तो खराब काम गऱ्यो?
दीना आपत्‌मा परेको थाह पाएपछि उसका दाइ शिमोन र लेवीले के गरे?
शिमोन र लेवीले गरेको कामसित के याकूब खुसी भयो?
याकूबको पूरै परिवार कसरी आपत्‌मा पऱ्यो?
उत्पत्ति ३४:१-३१ पढ्नुहोस्।
के दीना कनानका केटीहरूसित आक्कल-झुक्कल मात्र मात्र भेट्न जान्थी? व्याख्या गर्नुहोस्। (उत्प. ३४:१, NW )
दीनाले आफ्नो कुमारीत्व गुमाउनुमा किन केही हदसम्म ऊ आफै दोषी थिई? (गला. ६:७)
आज जवानहरूले कसरी दीनाको चेतावनीमूलक उदाहरणबाट पाठ सिकेको देखाउन सक्छन्? (हितो. १३:२०; १ कोरि. १५:३३; १ यूह. ५:१९)